बच्चाले बच्चाजस्तो हुन पाउनु पर्छ - Shikshak Maasik
by • • संवाद • Comments (0) • 679
हीरा भण्डारी (अध्यक्ष, विव्यस, भूमिराज प्रावि, अमरगढी, डडेलधुरा)
पहिले मेरा दुवै बच्चा धनगढीको निजी स्कूलमै पढ्थे । एउटामा चित्त नबुझ्ेपछि अर्कोमा लगें । दुई÷तीनवटै स्कूल फेरें । तैपनि चित्त बुझ्ेन । त्यहाँ कक्षा दुईको सानो बच्चालाई ५ कक्षाको उमेरका विद्यार्थीले पढ्ने किताब पढाइँदो रहेछ । अनि हरेक दिन किताब र कपीको भारी बोकेर बच्चा स्कूल जानु पर्ने । स्कूलबाट आएपछि खाजा खाइसक्न पाएको हुँदैन, गृहकार्यकै चपेटा हुन्छ । बिहान उठेर पनि बच्चा ‘मामु मेरो त होमवर्क बाँकी छ त्यही गर्छु’ भन्छ । ६÷७ वर्षको बच्चा बिहान उठेर खेल्न जानुपर्नेमा गृहकार्यको दबाब र तनावमा बस्नु पर्ने । हुँदा–हुँदा राति सपनामा समेत ‘मामु, मेरो होमवर्क बाँकी छ’ भनेर बर्बराउने ! कुनै दिन गृहकार्य गरेन भने स्कूलमा शिक्षकले नांगै पार्दा रहेछन् । शिक्षकले भनेको मानेन भन्ने नाममा कहिले हातमा त कहिले ढाडमा, कहिले कहाँ पिट्दा रहेछन् । आज बच्चाले नील डाम त बोकेर आएको छैन भनेर दिनदिनै मन झ्सक्क हुन्थ्यो । बच्चालाई यति डराउने बनाइएको रहेछ कि खेल्न जाऊ भन्दा पनि गृहकार्य गर्छु भन्थ्यो । यसरी मलाई मेरा छोराको बाल्यकाल खोसिएको अनुभूति भयो । त्यसले छोराको आत्मसम्मानमा ठूलो आघात पु¥याएको महसुस गरें ।
अनि बच्चाको निम्ति उपयुक्त विद्यालय कुन होला भनेर सोच्न र खोज्न थालें— त्यस्तो विद्यालय जहाँ बच्चालाई माया र स्नेह गरियोस्, अनुशासनका नाममा कठोर दण्ड नहोस्, पुस्तकको भारी बोक्नु नपरोस्, उमेर अनुसारका विषयवस्तुको पढाइ होस् । स्कूलको समग्र वातावरण यस्तो होस्, जहाँ बच्चा रमाओस्, स्कूलमा उसले चाहेको खेल्न, सिक्न, पढ्न, सोध्न पाओस् । घरमा फर्किएर आएपछि साँझ् थोरै गृहकार्य पनि गरोस् र धेरै समय खेल्न जाओस् ।
धनगढीबाट झ्किेर डडेलधुरा ल्याएँ । यहाँको एउटा निजी विद्यालय राम्रो छ भन्ने सुनेकी थिएँ । हेरिहालौं न त भनेर दुई चार दिन बच्चाहरूलाई त्यहाँ पठाएँ पनि । त्यहाँ बच्चालाई भित्र राखेर शिक्षक त बाहिरै पो बस्दा रहेछन् ! अनि मेरो ध्यान सामुदायिक विद्यालयतिर जान थाल्यो ।
निजी विद्यालयमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म पढ्ने, घोक्ने र गृहकार्य गर्ने तनावका बीच नै समय जान्छ । त्यहाँ बालबालिकाले सोच्ने समय नै पाउँदैनन् । जबकि सिर्जनात्मक सोचको विकास प्रकृति र समाजसितको जीवन्त अन्तरक्रियाबाट सम्भव हुने हो । त्यस्तो वातावरण सार्वजनिक विद्यालयमा धेरै छ । हो, त्यहाँका शिक्षकले सिर्जनात्मक सोच विकासमा धेरै योगदान गर्दैनन् । तर बच्चाले घरबाट स्कूलसम्म पुग्दा, स्कूलबाट घर फर्कंदा र घरमा बस्दा त्यस्तो वातावरण पाएको हुँदो रहेछ । गृहकार्यको बोझ् धेरै नहुने भएकाले साँझ् बिहान पनि बच्चाहरू छरछिमेका आफ्ना साथीहरूसित खेत–बारीमा खेल्न पाउँछन् । पर्याप्त सुत्न पाउँछन् । पूरा निदाएको बच्चा र कम निदाउन पाएको बच्चाको दिमागी विकास धेरै फरक हुने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानले पनि पुष्टी गरिसकेको छ । निदाउन पाएको मानिस सिर्जनशील हुन्छ, अरूको पछि लाग्दैन भने निन्द्रा नपुगेको मानिस अरूमा बढी भर पर्न थाल्छ, उसको सिर्जनशीलता घट्दै जान्छ । पर्याप्त सुत्न र खेल्न पाउँदा बच्चाहरू सधैं ‘फ्रेस’ हुन्छन् । राम्रो मानसिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकासको निम्ति बच्चा सधैं ‘फ्रेस’ हुनु पर्दछ । सार्वजनिक विद्यालयमा बच्चाले त्यो वातावरण पाउँछन्, निजीमा पाउँदैनन् ।
बच्चाले खेल्न पाउनु भनेको उसमा सिर्जनात्मक सोचको विकास हुने अवसर पाउनु हो । खेल्दा, घुम्दा आफ्नो सोच र निर्णयले चल्न पाउँछन् । त्यसले उनीहरूमा स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन गर्ने र निर्णय लिने क्षमताको विकास हुँदै जान्छ । यसबाट बच्चाको आत्मविश्वास बढाउन महŒवपूर्ण योगदान पुग्छ । स्कूलको मूल काम त बच्चामा आत्मविश्वास पैदा गर्ने नै हो । हामी हाम्रो बाल्यकालका यादगार क्षणहरूतिर फर्कौं न— स्कूलमा पढेको, सिकेको क्षण त कति नै याद आउँछ र ! तर साथीसित खेलेको, रमाइलो गरेको, चकचक गरेको, उटुंगो गरेको, अप्ठ्यारो काम गरेको, रूख चढेको, लडेको, भागेको, लखेटेको, नयाँ काम गरेको, सफलता मिलेको क्षणको मात्र याद आउँछ नि ! स्कूले जीवन भनेको जीवनका यादगार क्षणहरू निर्माण गर्ने समय हो । खासमा स्कूलले त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु पर्ने हो, जुन क्षणलाई बच्चाले जीवनभर मीठो र स्मरणीय क्षणको रूपमा सम्झ्रिहोस् । त्यस्तो क्षण पाएको र अनुभूति गरेको बच्चा आफसे आफ सिर्जनात्मक हुन्छ । तर हामीकहाँ २४ सै घण्टा किताब हातमा लिए मात्र राम्रोसित सिक्छ भन्ने साह्रै ठूलो भ्रम छ । हाम्रा धेरै शिक्षक र अभिभावकहरूमा यही भ्रम व्याप्त रहेका कारण तिनका बालबालिका र विद्यार्थीहरू त्यसको शिकार भएका छन् । मलाई लाग्छ, हाम्रो शिक्षा पद्धतिको सबभन्दा अँध्यारो पक्ष यही हो ।
सफलताको पहिलो आधार हो ठोस र सही योजना । शिक्षक र अभिभावकहरूसँग धेरै चरणमा छलफल गरेर हामीले विद्यालयलाई एउटा उत्कृष्ट सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय बनाउने सोच बनाएका छौं । खासमा यो समय योजना बनाउनमै बित्यो । योजना बनाइसकेर अब हामी क्रमशः त्यसको कार्यान्वयनमा लागेका छौं । सर्वप्रथम विद्यालयमा बिजुली ल्याउन पोल गाड्ने काम गरियो । अब छिट्टै बिजुली आइपुग्छ । विद्यालयलाई कसरी बालमैत्री बनाउने भन्ने कुरामा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । किनभने सिकाइको चुरो नै यसैमा रहेछ । जति राम्रो भौतिक पूर्वाधार भए पनि विद्यालयको वातावरण र सिकाइ प्रक्रिया बालमैत्री भएन भने विद्यार्थीले चाहे जति सिक्न र जान्न पाउँदैन । सकभर बच्चाहरूलाई दण्ड नदिउँ, दिनै परे पनि नाम मात्रको दिउँ भन्नेमा हाम्रो सहमति भएको छ । उदाहरणका लागि, कुनै बच्चाले ठूलै गल्ती ग¥यो भने उसलाई फूलमा पानी हाल्न लगाउने । त्यस्तै बच्चाहरूलाई उनीहरूको रुचिको काममा लगाउन बढी जोड दिएका छौं । विद्यालय भनेकै बच्चाको रुचि अनुसारको काम गर्न पाउने ठाउँ हो भन्ने धारणाको विकास गर्न पनि उनीहरूलाई त्यो वातावरण दिनु जरुरी छ, जसले उनीहरूलाई सिर्जनात्मक बनाउँछ, म गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पैदा गर्दछ ।
विद्यालयमा हाल एउटा मात्र कम्प्युटर छ । अब कम्तीमा आधा दर्जन जति कम्प्युटर थप्नु छ । एउटा मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर ल्याउनु छ । इन्टरनेट जोड्नु छ । त्यसपछि सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग आरम्भ हुनेछ । इन्टरनेटले शिक्षकहरूलाई सिक्ने÷सिकाउने थुप्रै सामग्री र उपायहरू उपलब्ध गराइदिने छ । शिक्षकहरूले निरन्तर सिक्न पाउने छन् । विद्यालयले सिकाउन चाहेर मात्र हुँदैन, सिकाउने तरीका सही भएन भने सिकाउन सकिंदैन । हाम्रो मुख्य ध्यान त सिकाउने तरीकामै हुनेछ ।
त्यस्तै, विद्यालयमा बाल–पुस्तकहरू अझ्ै धेरै थप्नु छ । बच्चालाई उनीहरूको रुचि र उमेर अनुसारका कथाका किताबहरू पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र उनीहरूमा पढ्ने बानीको विकास हुन्छ । त्यसैगरी, खेलकुदका सामग्रीहरू थप्नु छ । सबैले घरमा खेल्ने सामग्रीहरू पर्याप्त जोड्न सक्दैनन् । फेरि खेल्ने साथीहरू त विद्यालयमै हुन्छन् । त्यसैले हामीले धेरै भन्दा धेरै खेल्ने सामग्री जोड्ने विचार गरेका छौं ।
आजका धेरैजसो अभिभावकहरू स्कूलमुखी भएका छन्, शिक्षामुखी छैनन् । अभिभावकलाई बच्चाले कस्तो शिक्षा पाउँछ भन्दा पनि महŒवपूर्ण स्कूलको ‘ब्राण्ड’ लाग्छ । लाग्छ, हामीलाई देखासेखी, आडम्बर नै बढी प्यारो छ, बच्चाको शिक्षा र भविष्य भन्दा । जहाँ राम्रो वातावरण छ, राम्रो पढाइ हुन्छ, बच्चाको चौतर्फी विकास हुन्छ, त्यहीं पो पढाउने हो त ! ब्राण्डले पढाउने त होइन नि ! हामी अभिभावकले नै आफ्नो बच्चामाथि खेलवाड गरिरहेका छौं । विद्यालयमा के भइरहेको छ ? बच्चाहरू रमाएका छन् कि छैनन् ? सिर्जनशील हुन पाएका छन्÷छैनन् ? रुचि अनुसार काम गर्न, पढ्न र सिक्न पाएका छन्÷छैनन् ? बच्चामा सही बानी व्यहोराको विकास भएको छ, छैन ? समाज र देशप्रति के धारणा बनाएका छन् ? भविष्यमा देश र समाजलाई के योगदान गर्ने विचार बनाएका छन् ? शिक्षा भनेको यी र यस्तै सवालसित जोडिरहेको रहेछ । यसमा उचित ध्यान पु¥याउनु पर्ने देख्छु । यी सब कुराहरूमा सुधार त्यतिबेला मात्र आउँदो रहेछ, जब अभिभावकले विद्यालयमा चासो राख्छ, सक्रिय हुन्छ र विद्यालय सुधारको सक्रिय साझ्ेदार बन्दछ ।
सरकारी विद्यालयमा समस्या नभएका होइनन् । धेरै छन् । तर शिक्षाको आँखाबाट हेर्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षक र अभिभावकले हीन भावना पालेर बस्नु पर्ने कुनै कारण छैन । निजी विद्यालय भन्दा धेरै दृष्टिबाट सरकारी विद्यालयका सकारात्मक पक्षहरू बलिया छन् । आफूसित भएका राम्रा कुरा पहिचान गरौं । त्यसमा गर्व गरौं । शिक्षकहरूले मिहिनेत गरेर विद्यालयको समयलाई सिकाइमा सदुपयोग गरे भने अभिभावक पनि विद्यालयको सुधारमा हैंसे गर्न आई पुग्छन् र पाँच वर्षमै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा कायापलट ल्याउन सकिन्छ । यसमा कुनै शंका छैन । 
सुदर्शन घिमिरे÷दीर्घराज उपाध्याय